Umklomelo we-Asia Beauty Award Grace ekuphakanyisweni "I-Spa ye-Spa Enhle kakhulu."
Ezindaweni ze-SPA zaseTibetan ASIA BEAUTY SPA, eyingqayizivele neyingqayizivele eMoscow, konke kuhambisane nomqondo wokuphumula okuphelele nokubuyiselwa kwempilo.
I-ASIA BEAUTY SPA iqinisekisa izindinganiso ezingcono kakhulu emkhakheni wobuhle, amasu aseShayina naseTibetan wokubuthwa nokubukwa komzimba.
Ukusikwa kwe-Tibet sekukhona iminyaka eyizinkulungwane ezinhlanu. Amakholi asetshenziselwa ukugcina impilo yabo engokomoya nangokwenyama. Izindlela zadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Kwakukhona uhlelo oluhle oluhle lwezempilo oluchaphazela imbangela yalesi sifo, hhayi umphumela.
Enhliziyweni ye-massage yamaShayina neyamaTibet yindlela yokuphulukisa ye-acupressure, ephazamisa amaphuzu asebenzayo omuntu ohambisana nokusebenza okujwayelekile kwesitho sangaphakathi.
EMpumalanga bayaqiniseka: ubuhle beqiniso buyimiphumela emihle yesimo esiphelele sempilo yomzimba. Ezokwelapha zaseTibetan naseShayina, ukusikhipha umzimba kuyingxenye ebalulekile yokuphila okunempilo, ngoba umzimba onempilo umphumela wokulinganisela kwamandla, futhi izifo ziwumphumela wokuphazamiseka kwalesi silinganisane.
Ayikho imithi emhlabeni ongakwazi ukuncintisana neTibetan, ngesikhathi esifanayo isayensi, ifilosofi nobuciko. Phela, akuyona imfihlo kunoma ubani oye wafunda umzimba wesintu emininingwaneni encane kunazo zonke - njengoba kungekho muntu owakwazi ukukwenza.
Ukusikwa kwamaShayina nokuTibetan kuthuthukisa ikhwalithi yokuphila, kuvumela umuntu ukuba azizwe enempilo, ejabule futhi encane. Ngosizo lwezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zokubuthelwa kwe-Chinese neTibetan, kungenzeka ukulwa nokukhanda ikhanda, ukukhathala, ukucindezeleka, futhi nokuthuthukisa umsebenzi wezitho zangaphakathi zomuntu, ukwandisa ukusebenza kahle futhi uphephe ngokwengqondo ngokukhululekile ekukhathazeni nasezinkathazweni zedolobha elikhulu.
Isikhungo ngasinye se-Tibet ASIA BEAUTY SPA sinomsoco wayo:
I-ASIA BEAUTY SPA, ehlala eDmitrovsky pereulok ijabulisa izivakashi nge-hammam enokunethezeka lapho phansi kuhlanganiswa khona ngamatshe amancane ama-basalt amatshe ahlabayo izinyawo futhi adlulisele kuwo amandla emzimbeni womuntu.
E-salon yase-ASIA BEAUTY SPA (i- Pogorelskiy lane, 6 ) imisebenzi yezokwelapha, i-spa nebuhle emhlabeni iyahlanganiswa: ukunethezeka kwe-spa oriental spa, i-tetan spa yokubheka, ukuvuselela ama-spa, ukuguqula umzimba, i-pulsodiagnostics, i-cosmetology yobuhle bomzimba nomzimba.
Njengoba sinikezwe izifiso zezivakashi zethu, savula elinye - i-Asia Beauty Salon evulekile kunazo zonke, sihlanganisa neTang Restaurant. Uhlala endaweni efanayo isalindele umhlangano nawe.
Esikhathini esiyinkimbinkimbi esiyingqayizivele, i-Tan Restaurant - i-Asia Beauty Spa - umbuso wokuvumelanisa wezintathu ongu-story, ngaphansi kwemisindo enemilingo yemilingo yama-magic, emnandi ye-aromas yase-oriental, ungahle uhlele iqembu elihle elizokhunjulwa isikhathi eside ngawe nezivakashi zakho. Indawo eyingqayizivele yokudlela yokudlela ye-spa inekhono elihlukile. Lapha, kumenyu enwetshiwe yezinsizakalo zengezwa izijovo zobuhle, ukunakekelwa kwezinwele ze-spa, ukunakekelwa kwe-spa, ukuhamba kwe-spa, i-studio yokucubula, ukuxhumeka kwe-intanethi.
Kusihlwa noma ubusuku obuchitha endaweni enhle ye-spa, nge-massage engenakulibalekayo ye-Tibet kanye nezitsha ezimangalisayo zemenyu yama-king of the Tang Dynasty izonqoba umcabango wezinhlobonhlobo ezinhle kakhulu zokuphila okunempilo, okunomsoco nokuhle.
Sizokujabulela ukukunika izwe elikhethekile lamagugu aseMpumalanga - ukuhlakanipha, ukuzindla, ubuhle, impilo. Lapha zonke izivakashi zizozwa ibhalansi encane phakathi kokujabulisa okukhulu nesitayela esiphakeme. Izivakashi zethu - labo abathandayo ukunambitheka okubucayi, ukuphumula okungavamile, balungele ukuthola izinto ezintsha. Siyajabula ukumangala futhi sijabule izivakashi zethu.
Ukunethezeka kwama-spa ase-oriental;
Amasu okuvuselela okukhethekile okubhekiselwe ebusweni nasemzimbeni. Imenyu ecebile kakhulu, uhlu lwewayini, hookahs.
I-ASIA BEAUTY SPA isebenzisa ochwepheshe baseChina naseTibet abasebenzisa kuphela indlela engcono kakhulu yokuhamba ngemikhiqizo yezimonyo emisebenzini yabo. Kumasevisi wezivakashi ezinqubo ezingaphezu kwezingu-100 ezehlukene eziqondiswe ekuvuseleleni nasekuthuthukiseni.
Samukela njalo izivakashi! Isitifiketi sesipho esivela ku-ASIA BEAUTY SPA inikeza izaphulelo zokusilisa ngesilinganiso se-10-30%.
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa ngamasevisi aseSibetan aseTibetan i-Asia Beauty Spa - umqondo, izinsizakalo, izindleko, ukunikezwa okukhethekile nokukhushulwa - ungabona kuwebhusayithi yenkampani www.ab-spa.ru
I-SPA isikhungo se-ASIA BEAUTY SPA ungavotela kwiwebsite ye-Gracia Prize kusixhumanisi http: // премия-грация.рф / nominants_view.php? Id = 39
Ifoni yokuvotela abakhethiwe eMoscow: (ezinsukwini zamasonto kusuka ku-10.00 kuya ku-18.00). 8 (495) 6327902
I-sms yokuvota +7 (903) 5082795
Ukunakekela izandla ezomile
Ukulwa nes cellulite enganakiwe ekhaya
Ukubhulisa ngokusizwa ngamathini amaconsi
Amaski esikhumba entanyeni
Ungayigcina kanjani isimo somzimba ebusika?
Amasks entanyeni, zokupheka kwabantu
I-Pilaf e-Redmond multivark
Isisu esiswini nesisindo esincane
Isaladi nge-radishes, utamatisi kanye ne-yogurt
Ukubona ukuqhutshwa komsebenzi othize
Isaladi le-rocket nenkukhu
Umfana uphonsa, kodwa akanawo intombazane: isizathu
Izindebe zomlomo ezi-3 eziphezulu kakhulu ezingcono kakhulu zokwenza imvelo
I-Horoscope ye-Scorpio-Abesifazane ngoJanuwari 2017
Izakhiwo eziwusizo ze-artichoke yaseJerusalema
Ecomoda - kusasa
Indlela yokugcina ukuma njengoba kunjalo
Isithwathwa se-Snowman esenziwe ngezandla ezisuka kuNyaka Omusha ngezandla zakho, i-master class with instructions-step-by-step
UGoof noKeti Topuria baqinisekisile indaba yabo eyimfihlo, isithombe
Amapheya abhakawa ushizi
Tattooing henna ekhaya
Rabbit in ukhilimu omuncu